musha NAYE AMERICAN SoCCER STORI Giovanni Reyna Utariri Hwenyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Ehe!, Anonzi "Captain America". Chinyorwa chedu chinokupa chinyorwa chizere cheGiovanni Reyna Zvekuita Nyaya Yevechidiki, Biography, Chokwadi chemhuri, Vabereki, Upenyu hwepakutanga, Mararamiro, Hupenyu hwepamwe uye zvimwe zviitiko zvakakurumbira kubva paakanga ari mwana kusvika pakuzivikanwa.
Hupenyu nekusimuka kwaGiovanni Reyna. Mufananidzo Wekodhi: SI
Ehe, munhu wese anoziva kuti iye anoshamisa mhare pakati ane tarisiro huru. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanoona shanduro yedu yeGiovanni Reyna's Biography iyo inonyanya kufadza. Zvino, pasina imwezvezve ado, ngatitangei.
Giovanni Reyna's Nyaya Yemwana:
Imwe yemavambo ekutanga anozivikanwa maficha e Giovanni Reyna. Mufananidzo Wekodhi: SI.
Kutanga kubva, Giovanni Alejandro Reyna akazvarwa pazuva regumi nematatu raNovember 13 kuguta reSunderland kuEngland. Ndiye wechipiri pavana vana akazvarwa kuna amai vake Danielle Egan Reyna uye kuna baba vake Claudio Reyna.
Kunyangwe Giovanni akaberekerwa muEurope, anozivikanwa zvakanyanya senyika yeAmerica nekuti akashandisa chikamu chiri nani chehuduku hwake achikurira kuNew York City pamwe chete nemukoma wake mukuru, Jack nevanun'una vake - Joah naCarolina.
Paudiki Mufananidzo weGiovanni (kuruboshwe kuruboshwe) Kurera muNew York pamwe chete nehama dzake nehanzvadzi. Mufananidzo Wekodhi: SI.
Kukura muNew York, Giovanni aive mutambi akasununguka akasarudzika ane izvo zvaakatora kuti zvimirire mune chero mhando yemadhirezi uye chiitiko chemunda. Muchokwadi, aive nekutanga zvekunakidzwa gorofu uye aigona kuseta basketball asati asvika makore mashanu.
Parakazosvika Giovanni pakupedzisira ave nemakore mashanu, akatanga kutamba nhabvu mumapaki sekufadza vabereki vake avo vaifara zvikuru kuve nemwanakomana wavo wechipiri kuratidza kufarira mubhora uye kuitora seimwe yemitambo yehudiki.
Giovanni Reyna's Mhuri Yacho:
Hongu, baba naamai vaGiovanni vaisava varombo asi mafaro avaive nawo muhupenyu hwake hwebhola hwekuedza aive nemusoro sezvo vabereki vese vane nhoroondo yakapfuma mukutamba mutambo uyu. Kutanga naamai vaGiovanni, anga ari mutambi wenhabvu uye aimbove nhengo yeakadzi eboka renyika reUnited States. Mufananidzo uri pasi apa mufananidzo unofadza wevabereki vaGiovanni Reyna (Claudio naDanielle Egan).
Sangana nevabereki vaGiovanni Reyna. Mufananidzo Wekodhi: SI.
Parutivi rwake, baba vaGiovanni vaivawo munhu wekunze weUnited States uyo ane nhoroondo yekutamba kuGlasgow Rangers, Manchester City neSunderland kwakazvarirwa mwanakomana wake wechipiri. Nekudaro, kwaingova kwechisikirwo ivo vakafarira kufarira kwaGiovanni kuti vatsike nzira dzavo mukuvaka basa mumutambo.
Giovanni Reyna's Dzidzo neKubata Buildup
Kana nguva yacho yaive chaiyo, Giovanni wechidiki uye aida chinzvimbo akave chikamu cheNew York City Football Club (NYCFC) academy system kwaakatanga kuvaka basa rakasimba mukudzidza bhora.
Akave chikamu che NYCFC pazera diki kwazvo. Mufananidzo Credits: NYCFC uye SI.
Vanzwisisa chishuvo chemukomana wavo wekutamba nhabvu yekurarama, vabereki vaGiovanni Reyna (Claudio naDanielle Egan) vakaita zvese zvavaigona kutsigira zvishuwo zvake. Wakati Giovanni achiri kudzidza kutengeserana, akanyatsoteerera kumirayiridzo uye haana kuwanikwa achishomeka mukukura kwemuviri nepfungwa. Muchokwadi, aive anoshamisa ebhola prodigy uyo aiziva kuti aive neramangwana rakajeka munhabvu.
Giovanni Reyna's Makore Ekutanga muBhora:
Nekudaro, kusimuka kwaGiovanni kuburikidza nemazita kwaimhanya uye zvakanyanya zvakanyanya pamusoro pehukuru nekuti baba vake - Claudio aive director director we NYCFC asi haana kushandisa ruoko rurefu mukusimudzira zvido zveudyire kumudiki.
Nekudaro, kufambira mberi kwaGiovanni kwaive pachena uye kwaionekera kune vezera rake uye makochi akave akagumisa kuti aive munhu wechisikigo aine tarisiro izvo zvaizoitisa iyo academy kudada mune ramangwana.
Ramangwana rakajeka raGiovanni mumutambo rakamboonekwa nevaroora vake uye varairidzi pa NYCFC. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Giovanni Reyna's Nzira yekuenda Mukurumbira Nyaya:
Pamusoro pemitambo yeGiovanni yemitambo mu NYCFC, akaita zvakanaka chaizvo kubatsira timu yake kuhwina mukombe weGeneration Adidas munaKubvumbi 2017, shasha yakaona uyo ane makore gumi nematanhatu akabudawo semutambi akanakisa.
Chiizve? Giovanni akaenderera mberi achibatsira maUUs15 kuhwina mubairo wechidiki weTorneo Delle Nazioni vechidiki uye vakave nemugumo wakasimba wa 2017/18 ne NYCFC nekurova zvibodzwa gumi nezvitanhatu mumatanho gumi nematanhatu.
Unogona kumuona ari pakati pechikwata chekuchera waya? Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Giovanni Reyna's Biography- Iyo Rise To Mukurumbira Nyaya
Nekuita kwakadai kwakanaka, hazvishamise kuti Borussia Dortmund haina kutambisa nguva mukuchengetedza masevhisi emimhanzi. Pakutanga akagadzirwa kuti atambere timu yeGermany U19s timu muna 2019/20 isati yawana kusimudzirwa kuchikwata chekutanga chechikwata munguva yechando.
Paakagadzira Bundesliga yake yekutanga yeBorussia Dortmund, yakave rekodhi mushure mechirevo kuna Giovanni uyo akatsamwisa Christian Pulisic nekuva mudiki weAmerica kuti aoneke muBundesliga.
Wakanga uchiziva here kuti Giovanni zvakare akave wechidiki wevateresi munhoroondo yeGerman Cup paakawana kumashure kwemambure mukukunda kwa2 kuna Werder Bremen panguva yeDFB-Pokal Round yegumi nematanhatu?
Zvekare mushure memazuva gumi nemashanu gare gare, Giovanni akave mudiki weAmerica kutamba uye kunyora mubatsiri muChikwata cheChikwata cheChikwata cheChikwata paakatanga Erling Håland's mutambo-kuhwina chinangwa kubatsira Borussia Dortmund rekodhi kukunda 2-1 kukunda PSG. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Ona kuti ndiani akapa Erling Håland rubatsiro rwakaita kuti Dortmund ikunde. Mufananidzo Wekadhi: Chinangwa.
Giovanni Reyna's Musikana?
Fans uye vezvenhau havana kufara kuti Giovanni anongogadzira nhau nekuda kwake kunoshamisa kwenhabvu nhabvu uye kurekodha-kumisikidza spree. Saka nekudaro, vanoshuva nemwoyo wose kuziva nezve musikana wake kana kuti azive kana aine mukadzi akavanzika.
Nehurombo, zvishuwo zvakadaro zvaizoramba zvichinonoka sezvo Giovanni ane makore gumi nematanhatu chete panguva yekunyora iyi biography uye asina mwanakomana (s) kana mwanasikana (vakomana) kunze kwemuchato.
Mudiki, akabudirira uye akanaka kumeso Giovanni haana kuroora kana uri munaFebruary 2020. Mufananidzo weChikwereti: SI uye LB.
Iko kusava nekupokana kuti mukwikwidzi haafunge kuva nemusikana kana mukadzi sechinhu chekutanga. Izvi zviri kuuya sezvo akagadzirira kusimbisa chinzvimbo chake neBorussia Dortmund yekutanga timu. Zvikuru, kuisa zita rake pamabhureki evechidiki venhabvu vatambi kuti vatarise mumakore gumi anotevera ehabvu yepamusoro.
Giovanni Reyna's Hupenyu hwemhuri:
Ichokwadi chisina chokwadi kuti mhuri iri mumitambo inogara pamwe chete. Muchikamu chino, tinokuunzira chokwadi pamusoro pemhuri dzemhuri yaGiovanni kutanga nevabereki vake.
Kusvika pakuziva Hupenyu hwemhuri hwaGiovanni Reyna. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram
Zvimwe Nezve Baba vaGiovanni Reyna:
Claudio Reyna ndiye baba wepamberi. Kutonga nezita rake, unogona kufungidzira zviri nyore kuti ane asiri echirungu midzi yemhuri. Chokwadi ndechekuti, baba vaGiovanni Reyna "Claudio”Ane mabviro emhuri yeArgentina neyePortugal. Savaimboita nyanzvi dzaizoita, Claudio akaita basa rakakura mukudzidzisa kwevechidiki kwaGiovanni uye akabatsira pakukwira kwake kunhabvu yepamusoro.
Zvimwe nezvaGiovanni Reyna's Mum:
Vanamai vakakura vemitambo vakabereka vanakomana vemitambo uye amai vaGiovanni Reyna havasi ivo vanofarira. Danielle Egan Reyna mutambi wetsiva weAmerica akasara pamudhara, akambotamba timu yevatambi venhabvu muUnited States muna1993. Mufananidzo uri pazasi naGiovanni (mwanakomana wake), vaviri vanogovana chibvumirano chakasiyana.
Zvizhinji nezvaGiovanni Reyna's Mum, Danielle Egan. Chikwereti: Instagram
About Giovanni Reyna's siblings uye hama:
Wepakati pane vana vatatu mukoma wake waakakurira naye. Vanosanganisira munin'ina wake mukuru Jack nevanun'una vake - Joah naCarolina.
saGiovanni, Jack aive nezvido zvekutanga mubhora uye basketball asi akarwara nekenza yevacheche izvo zvakaunza kufa kwake zvisingaite paakanga achingova nemakore gumi nematatu. Taura nezvehama dzepamberi dzasara hama, mukoma wake Joah anofarira kubika uye nhabvu iye ari iye ega mwanasikana wemhuri - Carolina ari mumitambo yakati wandei panguva yekunyora Biovianni Reyna's biography.
Mufananidzo weuyo wepakati naamai vake, baba nevanun'una. Mufananidzo Wekodhi: SI.
Giovanni Reyna's Hupenyu Hwega:
Achifambira mberi kuhupenyu hwaGiovanni kure nebhola, ane mupfumi munhu anoratidza hunhu, hunhu, hunhu uye hunhu hwevanhu vane chiratidzo cheZodiac ndiScorpio.
Mutambi wepakati anoratidza zvine mwero chokwadi nezve hupenyu hwake hwepachivande uye hwomunhu oga, ane zvido zvake uye zvekunakidzwa zvinosanganisira kutamba gorofu, kuramba aine mitambo yebhasiketi uye kushandisa nguva yakanaka neshamwari dzake nemhuri.
Ichi chifananidzo chisina kujairika chaGiovanni achitamba gorofu kuti afare. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Giovanni Reyna's Lifestyle:
Nezve mararamiro aGiovanni, iye mutengo wake wakawanda uchiri kuongororwa panguva yekunyora asi ane musika mutengo wemamiriyoni mazana matanhatu emadhora. Nekukosha kwakadaro, zviri pachena kuti iwo wepakati haazi mheteti hombe kana mutengesi wakakura.
Naizvozvo, zvakatiomera kuona mudiki achirarama hupenyu hwoumbozha hwevamwe vaanoshanda navo anofamba mumigwagwa yeGermany aine mota dzinotyisa uye ane dzimba dzinodhura. Zvisinei, iye anopfeka zvinoshamisa kuti aende kumisangano inokosha neshamwari uye neshamwari.
Haisi nguva yose yaunoona vatambi vekupfeka vakapfeka classy asi Giovanni anodaro. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Giovanni Reyna's Chokwadi:
Kuputira yedu Giovanni Reyna yehucheche nyaya uye biography, heano zvishoma zvinozivikanwa kana chokwadi chisina kutaurwa nezvake.
Chokwadi # 1 - Mari Yemubhadharo:
Kubvira paakakanda muDortmund nhabvu, vateveri vazhinji vaenda ku internet mukuda kuziva kuti yakawanda sei yaGiovanni Reyna. Chokwadi chiri, tanorwisa chibvumirano chetsiva wepakati neBVB achimuona achihwina muhari wekutenderera € 600,000 pagore. Chakatonyanya kushamisika pasi apa Giovanni Reyna's mubhadharo kuputsika pagore, mwedzi, zuva, awa, miniti uye masekondi (senge panguva yekunyora).
Mapato muEuro (€)
Mari yekuwana muPound Sterling (£)
Mapato muUnited States Dollars ($)
Mari Yegore Negore € 600,000 £ 522,767.12 $669,501.00
Mari yekuwana pamwedzi € 50,000 £ 43,563.9 $55,791.75
Mapato Pavhiki € 12,500 £ 10,890.98 $13,947.9
Mari yekuwana pazuva € 1,785.7 £ 1,555.85 $1,992.56
Mari yekuwana Paawa € 74.4 £ 64.83 $83.02
Mapato Pamaminitsi € 1.24 £ 1.08 $1.38
Mari yekuwana Sekondi € 0.02 £ 0.018 $0.02
Uku ndiko kuwana kwakawanda kwaGiovanni Reyna kubva pawakatanga kuona peji ino.
Kana izvo zvaunoona pamusoro zvikaverenga (0), zvinoreva kuti uri kuona peji AMP. ikozvino Click HERE kuti awone muhoro wake zvichikwira nemasekondi.
Waizviziva here? Wepakati murume kuGermany anofanira kushanda kwechinguva 1.1 makore kuwana € 50,000, iyo iri iyo Giovanni Reyna anowana mumwedzi.
Chokwadi # 2 - Tattoos:
Zviri pachena kuti Giovanni haina hunyanzvi hwekuita muviri panguva yekunyora. Ari murudo nekuvhenekera ganda risina ganda pane ake ane mwero-unoshamisa kukwirira kwemamita matanhatu ne 6 inches.
Iye zvechokwadi anotaridzika zvakanaka pasina ma tattoos. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Chokwadi # 3 - Kusvuta uye kunwa:
Giovanni haaputi kana kunwa zvisina basa. Semhizha, kuziva kwake nezve kukosha kwekugara akagwinya uye akapinza nguva dzese kuitira zvakanakira iye.
Chokwadi # 4 - FIFA rating:
Giovanni haina yakanyanya kuomesesa chiyero cheFIFA che makumi matanhatu neshanu munaFebruary 63. Kunyangwe zvakadaro, hapana kurasa chokwadi chekuti ratings dzake ndidzo dziri kuwedzera meteoric. Izvi zvinodaro nekuti iye ane mwedzi mishoma chete achitamba nhabvu yepamusoro-ndege panguva yekunyora.
Kune nguva dzose kutanga kwekuzvininipisa. Mufananidzo Chikwereti: SoFIFA.
Chokwadi #5 - Chitendero:
Iyo yepakati isiri yakakura pane chitendero panguva yekunyora. Saka nekudaro kubata kwake panhau dzekutenda hakugone kugumisirwa zvachose. Zvisinei, zvinowanzoitika kuti vabereki vaGiovanni Reyna vanofanira kunge vakamurera kuti atore dzidziso dzechitendero chechiKristu.
Giovanni Reyna Wiki Enquiry:
Iyi tafura iri pazasi inopa ruzivo rwakakurumidza uye rwakajeka nezve Giovanni Reyna.
Giovanni Reyna Biography Chokwadi (Wiki Inquiry)
Zita rizere: Giovanni Alejandro Reyna
Zita rekudanwa: Captain America
Vabereki: Danielle Egan Reyna (Amai) naClaudio Reyna (Baba)
Hama: Jack Reyna (Mangwanani), Joah Reyna
Hanzvadzi sikana: Carolina Reyna
Mhuri Kubva: US, Argentina nePortuguese mhuri yakabva
Nzvimbo yaakakurira: Bedford, New York.
Nzvimbo Yokuzvarwa: Sunderland, England.
kukwirira: 6 ft 1 mu (1.85 m)
Basa: Kurwisa vatambi vepakati
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Giovanni Reyna Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusasarura. Kana iwe ukawana chimwe chinhu chisingaratidzika sezvakanaka, tapota tigovera icho isu nekupindura pazasi. Isu tichagara tichikoshesa uye nekuremekedza mazano ako.
Clint Dempsey Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Jozy Altidore Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
Yakagadziridzwa zuva: Kubvumbi 24, 2020